Under अन्डररेटेड तरिकाहरू तपाइँको व्यवसाय लाई बढावा दिन! - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B6B बजार समाचार
मार्च 24, 2021 मार्च 21, 2021 एलेक्स बेल्से B2B, ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार, ग्लोबल थोक अनलाइन, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
पछिल्ला वर्षका चुनौतिहरूले गर्दा व्यवसायले विश्वव्यापी रूपमा स .्घर्ष गरेको छ।
सामान्य रूपमा परिचित रिकभरी विधिहरू जस्तै वित्त खोज्नु वा लागत घटाउने, अन्य कम राम्ररी ज्ञात विधिहरूले पनि मद्दत गर्न सक्दछ।
यसमा तपाईंको उद्योगमा समान व्यवसायहरूसँग सहकार्य, अनलाइन नेटवर्कि events घटनाहरूमा भाग लिने, कौशल अभाव र प्रशिक्षण आवश्यकताहरूको पहिचान गर्न, र अधिक समावेश छ।
तपाईंको लक्षित श्रोताको लागि तपाईंको र तपाईंको व्यवसायलाई थप दृश्यता दिएर तपाईंको बिक्री बृद्धि गर्दै विभिन्न तरिकाहरूमा हासिल गर्न सकिन्छ। तपाइँको दृष्टिकोणमा रचनात्मक र महत्वाकांक्षी बन्ने प्रयास गर्नुहोस्, र किन तपाइँको व्यवसायलाई बढावा दिन निम्नलिखित छ शक्तिशाली - अझै अन्डररेटेड - तरिकाहरू प्रयोग गरेर सुरू गर्नुभएन?
१. यसलाई आधिकारिक बनाउनुहोस्: प्रमाणित हुनुहोस्
ग्राहकहरु र ग्राहकहरु को आँखा पक्रने को लागी एक उत्तम तरीका तपाईको कौशलसेट र ज्ञान को आधार आधिकारिक प्रमाणित प्राप्त गर्नु हो। उद्योग प्रमाणपत्र र मान्यता सँधै मूल्यवान हुन्छ किनकी यो एक तत्काल दर्ताकर्ता हो कि तपाईं वैध र प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ।
ग्राहकहरु र ग्राहकहरु संग समय र कम्पनी को पृष्ठभूमि मा व्यापक अनुसन्धान गर्न झुकाव छैन, यसको मतलब तिनीहरू गुणवत्ता र विश्वास को चाँडै सूचक खोज्छन्।
यी मध्ये, सब भन्दा विश्वसनीय र प्रभावी अन्य ग्राहकहरु बाट उत्कृष्ट समीक्षा हो, र उद्योग प्रमाणपत्र वा मान्यता। के तपाईंको उद्योगले कुनै प्रशिक्षण वा मान्यता प्रदान गर्दछ जुन तपाईं आफ्नो व्यवसायमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ? आज अन्वेषण गर्नुहोस्!
२. प्रशिक्षणमा लगानी गर्नुहोस्
चाहे तपाईं आफ्नो उद्योगको एक दिग्गज हो वा कुल नयाँ। तपाइँ र तपाइँको टोली सँधै अतिरिक्त प्रशिक्षण र अनुभव प्राप्त गरेर फाइदा लिनेछ। त्यहाँ उद्योग परिवर्तनहरू हुन सक्छन् जुन तपाईं सचेत हुनुहुन्न, वा नयाँ दृष्टिकोण जुन तपाईं आफ्नो पुरानोलाई मन पराउनुहुन्छ।
प्रशिक्षणले तपाइँ र तपाइँको कार्यबल समग्र अझ बढी कुशल र दक्ष बन्न मद्दतको साथ ताजा परिप्रेक्ष्य पनि प्रदान गर्न सक्छ। यो नबिर्सनुहोस् कि तपाईं बिभिन्न मूल्य बिन्दुहरूमा प्रशिक्षणमा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ - चाहे त्यो विस्तृत (र महँगो) उद्योग कोर्सको साथ होस्, वा केवल तपाईंको आफ्नै समयमा नि: शुल्क।
Your. तपाईंको बजेटको पुनर्मूल्यांकन गर्नुहोस्
आधारभूतहरूमा फर्कनको लागि परिवर्तन र उल्टो उठाउने समयहरू उत्तम समय हुन सक्छ। यो प्राय: यहाँ हुन्छ कि तपाइँ सबैभन्दा ठूला परिवर्तनहरूलाई असर गर्न सक्नुहुन्छ र सब भन्दा बढि प्रगति देख्न सक्नुहुन्छ - तपाइँको व्यापार प्रक्रियाहरूमा विस्तृत रूपमा केही थप नगरी नै।
एक महान उदाहरण तपाईंको बजेट हो। तपाईको बजेट लाई नियमित रुपमा समीक्षा वा अद्यावधिक गरेर तपाई यो निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि कुनै पनि आउटगोइ automatic स्वचालित वा बेहोश भएको छैन, र तपाई र तपाईको व्यवसाय अझै ध्यान दिई खर्च गरिरहेको छ - तपाईको महत्वाकांक्षाहरु संग पign्क्तिबद्ध गर्न र तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ।
चाहे तपाईं आफैंलाई लेखा परीक्षा दिनुहोस् वा पेशेवरको मद्दत लिनुहोस्, समीक्षा गर्नुहोस् र आज तपाईंको व्यवसाय बजेट रिफ्रेस गर्नुहोस्!
More. बढी मिलनसार हुनुहोस्
तपाईंको व्यवसायलाई बढावा दिन एकदमै प्रभावकारी तरीका भनेको अधिक सक्रिय र दृश्यमान हुनु हो! व्यवसाय मालिकहरूको लागि, यो टिप दुबै अनलाइन र व्यक्तिगत-नेटवर्किंग दुबैमा लागू हुन्छ।
ईन-पर्सनल नेटवर्कि eventsमा घटनाहरू, सम्मेलनहरू र उद्योग पालना गर्नेहरू सामेल हुन सक्दछन्, जबकि सामाजिक रूपमा टाढाका वा टाढाका नेटवर्कि methods विधिहरूले लाइभ स्ट्रिमहरू, अनलाइन प्रश्नोत्तर रूपमा, र एक सक्रिय, आकर्षक सामाजिक मिडिया उपस्थिति कायम गर्न सक्दछ।
त्यस्तो बेला जब धेरैले विच्छेदन भएको महसुस गर्छन् वा एक्लो महसुस गरिरहेछन्, व्यवसाय र उद्यमीले व्यक्तिहरूलाई नयाँ जडान बनाउन र एक वास्तविक समुदाय बनाउन सहयोग गर्न कदम चाल्न सक्छन्।
Colla. सहयोग गर्नुहोस्
तपाइँको व्यवसायले एक सहकार्यबाट फाइदा लिन सक्छ कि विचार गर्नुहोस्। यो पूरक व्यवसाय वा व्यक्तिगत तपाइँसँग उस्तै उद्योगमा अपरेटिंग, एक स्थानीय पहल, वा एक सम्बद्ध वा प्रभावशाली कार्यक्रमको साथ हुन सक्छ, उदाहरणका लागि।
सम्भावित रूपमा दोब्बर (वा डरलाग्दो, वा अधिक!) तपाईंको पहुँचको भन्दा तपाईंको व्यवसायलाई बढावा दिन यो भन्दा राम्रो अरू कुनै तरीका छैन। सहकार्यहरू नेटवर्क निर्माण गर्न र साझेदारी गर्न उत्तम तरिका हो, र ग्राहकहरु को एक व्यापक श्रृंखला को लागी हेर्न को लागी छ जो तपाईको उत्पादहरु वा सेवाहरु बाट फाइदा हुन्छ।
6. विशेषज्ञहरु लाई आउटसोर्स
तपाईंको व्यापारको शक्ति बढाउनको लागि एक अन्डररेट टिप भनेको यसको कमजोरीहरूको बारेमा इमान्दार हुनु हो। तपाईंको व्यवसायका कुन क्षेत्रहरू छन् जुन तपाईंसँग स struggle्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, समय छैन, वा भावशून्य महसुस गर्नुभयो? यिनीहरू हुन सक्छन् जसलाई सबैभन्दा धेरै ध्यान चाहिन्छ!
त्यस्ता अवस्थाहरूमा विशेषज्ञहरूलाई आउटसोर्सिंग गर्ने विचार गर्नुहोस् र उनीहरूको विशेषज्ञताको इनाम काट्नुहोस्! धेरै व्यवसायहरू बोली र टेन्डर लेखकहरू संलग्न गर्छन्, उदाहरणका लागि उनीहरूको अवसर अधिकतम गर्नुहोस् काम सुरक्षित गर्न को लागी। अन्यले एसईओ प्रोफेशनर्सलाई काममा लगाउँछन् कि उनीहरूको व्यवसायलाई अनलाइन अनुकूलित गरिएको छ, वा कपीराइटरहरू प्रयोग गर्छन् जसले सबैभन्दा प्रेरणादायक र प्रभावकारी तरीकामा लेख्न सक्दछन्।
तपाईंको व्यवसायका केही कमजोर क्षेत्रहरूको पहिचानले तपाईंलाई ती क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञहरू मद्दत गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यसले तपाईंको विकास र तपाईंको दक्षतामा शक्तिशाली प्रभाव पार्न सक्छ!
व्यापार सांप्रदायिक समाचार वृद्धि मार्केटिङ पदोन्नति
कसरी एक सफल चाल को लागी प्याक गर्ने - T टिप्स